Njirimara Hydroponics, Ojiji, na Uru | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
E nwere ụzọ ndị ọzọ esi eto osisi na-abụghị ala ubi, ubi, na ite. Ọ bụ maka ihe ọkụkụ hydroponic.
1 Gịnị bụ hydroponics?
2 Hydroponics Njirimara
3 Hydroponics na-eji
4 Nkuzi na uru ndi hydroponics nyere
5 Iji ihe
Gịnị bụ hydroponics?
Hydroponics bụ usoro nke mejupụtara site na iji ngwọta maka ahịhịa na-eto eto kama iji ala. Enwere ọtụtụ ụzọ iji usoro a ma ọ bara ezigbo uru. Chọrọ ịma ihe niile gbasara hydroponics?
Mgbe anyị ji usoro a maka ịkọ ihe, mgbọrọgwụ na-enweta ihe ngwọta bara ụba na nri ndị dị mkpa iji too na nke mgbatị dị mma na-agbaze na mmiri. Na mgbakwunye, ihe ngwọta a nwere ihe ndị dị mkpa dị mkpa maka mmepe nke ahịhịa. N'ihi ya, osisi ahụ nwere ike itolite na azịza ịnweta naanị, ma ọ bụ na-ajụ ase inert, dị ka gravel, pearlite ma ọ bụ ájá.
A chọpụtara usoro a na narị afọ nke XNUMX mgbe ndị ọkà mmụta sayensị hụrụ na osisi ndị na-amịkọrọ mmiri na-etinye n'ime mineral ndị dị mkpa. Na ọnọdụ okike, ala na-eme dị ka ihe nchekwa nke mineral nri, ma ala n’onwe ya adịghị mkpa maka osisi ka o too. Mgbe a na-agbaze mmiri na-edozi ahụ n'ime ala, mgbọrọgwụ nke osisi ahụ nwere ike ịmịkọrọ ha.
N'ihi na osisi nwere ike itinye nri na ihe ngwọta, a chọghị mkpụrụ maka osisi iji too ma too. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi ọ bụla nwere ike itolite site na iji usoro hydroponic, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ na-adị mfe na nsonaazụ kacha mma karịa ndị ọzọ.
Taa, ọrụ a na-erute nnukwu mba na mba ebe ọnọdụ ọrụ ugbo dị njọ. Site na ijikọta hydroponics na njikwa griin ha dị mma, mkpụrụ na-adị elu karịa nke enwetara n'ubi ikuku.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịme akwụkwọ nri na-eto ngwa ngwa ma nye ha nri nri bara ụba. Usoro hydroponics ọ dị mfe, dị ọcha na ọnụ ala, ya mere maka oru ugbo nke pere mpe, nke a bu ihe ndi mara nma.
O nwetala ụkpụrụ azụmahịa na ụfọdụ nri, ihe ịchọ mma na osisi ụtaba na-eto n'ụzọ dị otu a maka ọtụtụ ebumnuche metụtara enweghị ala zuru oke.
Taa, enwere ọtụtụ mpaghara nwere ala nwere nsị ma ọ bụ microorganisms na-akpata ọrịa osisi ma ọ bụ site na iji mmiri mmiri nke na-emebi ala nke ala. N'ihi ya, hydroponic cultivation bụ ihe ngwọta nye nsogbu nke mpaghara emetọworo.
Mgbe anyị na-ejighị aja dị ka ebe anyị ga-eto, anyị anaghị enwe mmetụta na-echekwa ala nke ala ubi. Otú ọ dị, ha nwere nsogbu dị iche iche na ikuku oxygenation nke mgbọrọgwụ na ọ bụghị ihe a pụrụ ịkpọ dị ọcha na akpịrịkpa azụmahịa.
E nwere ọtụtụ ndị na-eji hydroponics. Ndị nwere oge efu chọrọ ịmasị na nyocha, maka nyocha, maka ngosipụta nye ụmụ akwụkwọ gbasara mkpa nke ụfọdụ kemịkalụ, ọbụlagodi ndị chọrọ itolite n'ime akpa ma ọ bụ obere tub, itolite na mbara ala ma ọ bụ maka nnukwu akuku.
Nkuzi na uru ndi hydroponics nyere
Mkpụrụ osisi Hydroponic amalitela n'oge na-adịbeghị anya nyere ụzọ eji ya na mmetụta gburugburu ebe obibi ọ na-eweta. N'otu aka, anyị na-ahụ ụdị ndị ahụ imeghe, nke bụ ndị na-atụfu nsị ahụ, na aka nke ọzọ, anyị nwere ndị mechiri emechi, nke na-ejigharị ihe ngwọta edozi ahụ dị ka ụdị nchebe gburugburu ebe obibi na ụba akụ na ụba n'iji ya eme ihe.
Hydroponics na-ezere nsogbu na mgbochi nke ala ọrụ ubi na-eweta. Ala oru ugbo choro nkpuru, ihe siri ike, ahihia ahihia, nri, ogwu, wdg.
Hydroponics nwere ike ịnwe mkpụrụ inert ma ọ bụrụ na achọrọ, dịka perlite, pumice, peat, gravel, Wdg
Usoro hydroponic bụ nke mbụ nke ụdị "mepere emepe", ebe ọ bụ na echeghị mmetụta gburugburu ebe obibi nke ihapu nke nsị a na-eji akọ ihe. Ozugbo ha hụrụ mmetụta nke nkwụsị nke ihe ngwọta na gburugburu ebe obibi, ụzọ 'emechiri' mepụtara. Usoro a dabere na iji ihe oriri eme ihe maka ihe ọkụkụ ndị ọzọ, na-ezere ịmetụta mmetụta na gburugburu ebe obibi.
Hydroponics na-enye ọtụtụ elele karịa ihe ọkụkụ.
Ọ na-enye ohere itolite n'ime ụlọ (mbara ihu, mbara ala, patios, wdg)
Chọrọ obere ohere (overlapping nrụnye nwere ike ime ka ịmụba ohere ahụ)
Oge ihe ọkụkụ dị mkpụmkpụ karịa na ọrụ ugbo ọdịnala, ebe ọ bụ na mgbọrọgwụ dị na kọntaktị na nri, na-enweta uto pụrụ iche nke ị ga-agba, akwụkwọ na mkpụrụ osisi.
Ọ chọrọ obere ọrụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịrụ ọrụ ala (wepu ala ahụ, mepụta transplant, hichaa ihe ubi, wdg)
Enweghị nsogbu nke mbuze dị iche iche, dị ka ihe ọkụkụ ọdịnala
Ọ dịghị mkpa itinye fatịlaịza, ya mere, akwụkwọ nri a na-emepụta bụ 100% organic.
Nke bu eziokwu adịghị mkpa nri ọ bụ nnukwu uru n'ihe gbasara mmetụta gburugburu ebe obibi. Dị ka anyị si mara, oke ojiji nke nri nitrogen bụ otu n'ime ihe na-akpata eutrophication nke mmiri na mmetọ mmiri. Site na izere iji fatịlaịza eme ihe, anyị ga-ebelata mmetụta ọjọọ na gburugburu ebe obibi.
N’oge na-adịbeghị anya, etinyere etu esi etinye arịa na sistemụ hydroponics. Yana "exponentially elu" na-amịpụta, ojiji nke containers na hydroponics ana achi achi na ihe niile na-eto eto na usoro na- ha ga-eji 90% obere mmiri mee ihe karịa ka eji ya n'ọrụ ugbo.
Mgbe ị na-eji hydroponics akpa, ọ dị mkpa iji hụ na mmiri gafere otu ebe na minit iri na abụọ ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-atụgharị ihe ọkụkụ ka ọ bụrụ ugbo na-ebugharị.
Ọ bụrụ na anyị na-eme mgbawa, na-eji hydroponics, enwere ike iwe ya ihe dị ka 4.000 ruo 6.000 kwa izu akwụkwọ nri (nke ruru ihe dị ka tọn 50 kwa afọ), nke ruru 80 ugboro ọnụ ọgụgụ nke nkeji nke enweta n'otu oghere site na iji usoro ịgha mkpụrụ na usoro owuwe ihe ubi na ugbo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, hydroponics bụ usoro na-agbasawanye ebe niile, ebe ọ naghị achọ ala ubi ma na-ebute akụ na ohere. Ọ bụrụ na anyị agbatị hydroponics, anyị ga-enye ezumike ala ala ubi nke na-enwe nrụgide dị ukwuu site na fatịlaịza na-aba ụba, plow, ahịhịa na ọgwụ ndị ọzọ ejiri, ebe na-enye aka na mbelata mmetọ.
Mkpụrụ osisi hydroponic, gịnị ka ha bụ na otu esi eme otu na ụlọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Hydroponics
M ga-enwe mmasị ịmata ụdị nri na-ebu osisi na ebe a zụrụ ha.
Ebee ka ị nwere ike ịzụta tubes pvc square iji nwee ike ịmalite ma ọ bụ mesoo ya na hydroponics maka iji ezinụlọ na argenrin?
Ntughari bins, agba na ihe ọ pụtara
Mgbanwe ohuru ohuru site na Big Data